2 Tantara 8 - Ny Baiboly
2 Tantara toko 8
Tanàna naorin'i Salomona - Fandaminana ny fombam-pivavahana fanao ao amin'ny tempoly vaovao - Sambo nalefa tany Ofira.
1Nony afaka ny roapolo taona, ka efa vitan'i Salomona ny tranon'ny Tompo sy ny tranony, 2dia naoriny indray ireo tanàna nomen'i Hirama azy, ka zanak'Israely no namponeniny tao.
3Notafihin'i Salomona, Etama-Sobà, ka azony. 4Dia nanorina an'i Tadmora tany an'efitra izy, mbamin'ireo tanàna fitehirizana rehetra any amin'ny faritanin'i Emata. 5Naoriny koa Betorona ambony sy Betorona ambany, tanàna mafy misy manda sy vavahady ary karetsaka hazo. 6Baalata mbamin'ny tanàna fitehirizana rehetra izay an'i Salomona, ny tanàna rehetra ho an'ny kalesy, ny tanàna ho an'ny mpitaingin-tsoavaly, mbamin'izay rehetra tian'i Salomona naorina tany Jerosalema sy tany Libàna ary tany amin'ny tany rehetra nanapahany. 7Ny vahoaka rehetra sisa tavela, tamin'ny Heteana, ny Amoreana, ny Ferezeana, ny Heveana ary ny Jeboseana, izay tsy isan'Israely, 8dia ny taranak'ireo, izay nandimby azy nipetraka tamin'ny tany, ka tsy naringan'ny zanak'Israely, no nalain'i Salomona ho mpanao fanompoana, mandrak'androany. 9Fa tsy mba nisy nandevozin'i Salomona nampanaovina ny raharahany ny zanak'Israely, na dia iray aza; fa izy ireo kosa no miaramilany sy mpifehy ny manam-boninahiny ary komandin'ny kalesy amam-pitaingin-tsoavaliny. 10Dimampolo sy roan-jato no lehiben'ny komadaoron'i Salomona mpanjaka, niandraikitra ny fanapahana ny vahoaka.
11Nasain'i Salomona niakatra avy any an-tanànan'i Davida, ny zanakavavin'i Faraona, ho ao amin'ny trano nataony ho azy, fa hoy izy: Tsy hitoetra ao an-tranon'i Davida mpanjakan'Israely ny vadiko, satria masina izany fitoerana izany, izay efa nidiran'ny fiaran'Andriamanitra.
12Tamin'izany Salomona dia nanatitra sorona dorana ho an'ny Tompo teo ambonin'ny otelin'ny Tompo izay naoriny teo anoloan'ny fidirana. 13Ka izay voadidin'ny lalàn'i Moizy dia nateriny isan'andro sy isan-tsabata; ary amin'ny voalohan'ny volana, sy amin'ny fety, intelo isan-taona, dia ny fetin'ny azima, ny fetin'ny herinandro, ary ny fetin'ny tabernakla. 14Notendreny, araka ny nandaharan'i Davida rainy azy, ny antokon'ny mpisorona ho amin'ny fanompoany, sy ny Levita ho amin'ny anjara raharahany, hankalaza an'ny Tompo sy hanao fanompoana eo anoloan'ny mpisorona, araka ny fandaharana ny andro isany, ary ny mpiandry varavaravana ho an'ny isam-baravarana, araka ny antokony avy, fa toy izany no nandaharan'i Davida, olon'Andriamanitra, azy. 15Tsy nihatahana ny didin'ny mpanjaka momba ny mpisorona sy ny Levita, na amin'ny zavatra inona na amin'ny zavatra inona, indrindra fa ny amin'ny momba ny rakitra.
16Toy izany no efa nahavoavoatra ny asa rehetra nataon'i Salomona hatramin'ny andro nanorenana ny tranon'ny Tompo ka hatramin'ny nahavitany. Dia vita ny tranon'ny Tompo.
17Tamin'izay Salomona dia nankany Asiongabera sy Ailata eo amoron'ny ranomasina, any amin'ny tanin'i Efoma. 18Ary nampanaterin'i Hirama sambo sy mpanompo mahay ranomasina ho azy, ny mpanompony. Dia niara-nandeha tamin'ny mpanompon'i Salomona ireo, ho any Ofira, dia naka talenta volamena dimampolo sy efa-jato ireo, nentiny ho any amin'i Salomona mpanjaka. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0060 seconds